Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka waramay in cadawga laga furtey hub iyo saanad badan.
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka waramay in cadawga laga furtey hub iyo saanad badan.
Posted by ONA Admin	/ April 1, 2014
Warbixintii aan ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO oo faahfaahin dheeraad ka bixisay dagaallo badan oo ciidanka gumaysiga lagu naafeeyay bishan March gudaheeda. Warbixinta aan ka helnay Xarunta Dhexe waxaa ka mid ah in 16kii bishan March ay qabsadeen CWXO xero ciidanka gumaysiga uu ku lahaa Hoola oo ka tirsan Ararso. Weerarada cadawga lagu qaaday intii u dhexeysay 20-26kii bisha March khsaraaha cadawga lagu gaadhsiiyay inta tirakoobkooda oo faahfaahsan la helay waxaa lagaga dilay cadawga askar darajooyin kala duwan lahaa oo gaadhaya 42 askari meesha dhaawacu uu intaa ka badan yahay.
Goobaha ay dagaaladaa ka dhaceen iyo khasaaraha soo gaadhay cadawga oo faahfaahsan waa sidan;.
16/3/14 Hoola oo dagmada Ararso katirsan weerar mir ah oo ay CWXO ku qaadeen ciidan uu gumaysigu leeyahay oo halkaas ku sugnaa waxay ku gaadhsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfaahin laga helin isla 16/3/14 weerar subixii ah oo ay N/hurayaasha CWXO markale ku qaadeen isla Hoola waxaa ciidanka jabhada ONLF usuura gashay in ay goobta lawareegaan hub iyo saanad badana qabsadaan.
21/3/14 Laabxaraar oo Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
22/3/14 Dagmada Dhuxun weerar gaadma ah oo ay CWXO ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada cadawgu daganaayeen waxaana cadawga lagaga dilay 5 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/3/14 Damal oo Baabili katirsan weerar dhaba gal ah oo ay CWXO ku qaadeen kuwa gumaysiga oo goobtaas marayay waxayna kagaga dileen 9 askari 7 kalana way kaga dhaawaceen.
22/3/14 Daandi oo dagmada Baabili katirsan dagaal kulul oo CWXO iyo kuwa wayaanaha kudhax maray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubsaday 9 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/3/14 Simane oo Dudumocadka udhaw kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soo galay kolanyo uu cadwgu leeyahay waxayna goobta ku holciyeen 1 baabuur oo isaga iyo wixii saaraaba isla basbeeleen sidoo kale rasaas lahuwiyay baabuurtii kale waxaa cadawga kaga bakhtiday 12 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/3/14 Labigaoo Dhagxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare aan faahfaahin tiisa lahaynin.
24/3/14 Waylajoogeen oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/3/14 Garaslay oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
25/3/14 Qamuuda oo Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh.
26/3/14 Dalyareey oo Iimaybari udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
26/3/14 Labitaaloole iyo Shabeeleey oo dagmada Dhagaxmadow kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada cadawga lagusoo gaagaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.